Muri pano: musha / Technology News / famba / Google inotsanangura Android 12's itsva Internet Panel, inoti 'inonyanya kunzwisisika'
Dzimwe shanduko dziri kuuya nePixel Feature Drop itsva.
Google inoedza kutsanangura maitiro ekufunga kuseri kwayo itsva Internet tile muKurumidza Settings.
Google inoti yaive mhedzisiro yezvidzidzo zvinoratidza kuti iyo UI nyowani inobatsira kudzivirira yakawandisa nharembozha kushandiswa.
Google inoronga kuwedzera dzimwe shanduko nePixel Feature Drop iri kuuya.
Android 12 yakaunza shanduko zhinji dzeUI, kunyanya kuMenu yeKurumidza Zvirongwa. Imwe shanduko iyo vashandisi havana kunyanya kufara nazvo ndiyo itsva Internet Panel, iyo inosanganisa uye kutsiva yakamira Wi-Fi uye Data toggles. Google sezviri pachena yaona zvichemo nekuti iko zvino yave kuyedza kudzivirira shanduko.
mune munharaunda post neMuvhuro, Google yakatsanangura maitiro ayo ekufunga kuseri kweInternet Panel itsva. Chichemo ndechekuti vashandisi havachakwanise kushandura data kana Wi-Fi pa kana kudzima iyo iyo tebhu yebhatani; iyo Internet tile inovhura menyu yakaparadzana uko nharembozha uye Wi-Fi yekubatanidza inogona kutariswa, uye kubva ipapo ivo vanogona kuchinjika kana kudzima, vachiwedzera nhanho kune iyo maitiro.
Kubva muzvidzidzo zvedu zvemushandisi, takaona kuti ruzhinji rwevashandisi vanodzima Wi-Fi kuitira kuti vamanikidze foni yavo kuti ibatanidze kune maserura. Izvi zvinowanzoitwa mukupindura kushata kweWi-Fi yekubatanidza uye kushomeka kweimwe nzira yekuita kuti foni ibatane pachena kune inotakura mushandisi.
Vashandisi vanodzima Wi-Fi vanowanzo kanganwa kudzosa Wi-Fi zvakare, zvichikonzera kuti zvigone kushandiswa kwenharembozha.
Google inoti yakaita shanduko kuti zvive nyore kushandura kunharembozha "nematepi maviri anokurumidza" kudzikisira vashandisi ve "pain point" yavaive nayo pane mamwe nhare dzakanakisa dzeAndroid. Ndichiri kubvuma kuti shanduko yakatora kujaira, vashandisi vakazoona iri mhinduro inonzwisisika.
Pamusoro pezvo, nepo Google ichicherekedza kuti iyo itsva Internet Panel haigone kuwanikwa kubva kukiyi skrini panguva ino, kushanda uku kunofanirwa kuuya mune inotevera kota yePixel Feature Drop.
Kunyange isu tisina kuwana Pixel Feature Drop mwedzi wapfuura nekuda kwekuburitswa kwe Android 12, isu tinofanirwa kutarisira imwe muna Zvita apo izvi uye zvitsva zvinotarisirwa kusvika pa Pixel 6.
Uye kunyangwe iwe ungasazvifarira, Google sezviri pachena haina kuita shanduko isina kuisa vamwe kufunga mazviri. Nekudaro, izvo zvinogona kunge zvisina kunaka zvakakwana kune vashandisi vanosarudza kuve nekubata kamwe chete kune aya marongero.
Iyo itsva standard
$ 599 pa Best Buy
$ 599 ku Amazon
Kutengeka zvine simba
Iyo Google Pixel 6 ndiyo ichangoburwa mureza kubva kuGoogle, ine dhizaini nyowani uye nehungwaru-yakagadzirwa Tensor processor, inogonesa smart AI kugona kwese mufoni yako yese.